ULondolozo lweeNgcaciso zoRhwebo-Funda ukuRhweba
tag: Iingcamango zorhwebo
I-USD / CHF emangalisayo yokuThengisa
I-USD / CHF itshone namhlanje njengoko i-DXY ibhalise ukuthengisa okukhohlakeleyo. Esi sibini sifikelele kwinkcaso eyomeleleyo, ke ukwehla kwe-DXY kutyikitye ukulungiswa okunokwenzeka kwesi sibini.
I-Index yeDola yaseMelika ibonakalise ezinye iimpawu ezigqityiweyo kwixesha elifutshane. Ukwahlukahlukana kwe-bearish kubonise ukuba inokuphinda iphinde iphinde iphindaphinde. Kubonakala ngathi iinkunzi zeedola ze-USD zaphoxeka emva kweMizuzu yeNtlanganiso ye-FOMC, okanye ingxelo yayizolo yayisele ibandakanyiwe kwintsebenzo yamaxabiso.
Indawo yethu kwi-USD / CHF isavulekile emva kokuvala ⅔. Esi sibini sifumene ukuxhathisa kwi-R1 (0.9266) nangaphezulu kwinqanaba le-61.8%. Ukwahlukana okunamandla kwinqanaba le-pivot yeveki (0.9213) kutyikitye abathengisi abomeleleyo kunye nokuqhubeka okungalunganga kwixesha elifutshane.
Ngokobuchwephesha, ujoliso olusezantsi olulandelayo lubonwa ngeveki ye-S1 (0.9152) nakwindlela yokunyuka komgangatho ophakathi we-pitch (lml).
I-USD / CHF ibonakalise ukudinwa okunokubakho emva kokusilela ukubuyela ukufikelela kwaye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isombululeke nge-USD. Ukwehla kwe-DXY kwanyanzela isibini ukuba siyeke ngokunjalo, sinolungelelwaniso oluqinisekileyo phakathi kwezi zimbini (isibini semali / isalathiso semali).
tags Forex Analysis Technical, Iingcamango zorhwebo, ukuseta urhwebo, USD / CHF
Ukulungiswa kwe-NZD / JPY kunokuba ngaphezulu
Ukuhlaziywa: 11 Juni 2021
I-NZD / JPY yayikwinqanaba lokulungisa kodwa inqanaba libonakala lithe kratya ngeli xesha lokubhalwa. Ixabiso libekwe ngezantsi kwenqanaba lokuxhathisa okunamandla, ke kufuneka silinde isiqinisekiso.
I-bias iyaqhubeka nokunyusa nangona ukuhla kokugqibela. Ukwehla kwethutyana kukaNikkei kuncede iYen ukuba inyuke xa ithelekiswa neentshaba zayo. Ukukhula okunokubakho kweJP225 kunokunyanzela imali yaseJapan ukuba ilahlekelwe ngumhlaba xa kuthelekiswa neentshaba zayo.
Uhlalutyo lobuchwephesha lwe-NZD / JPY H4!
I-NZD / JPY yehlisiwe emva kokusilela ukufikelela kumgca ophezulu ophakathi we-pitchfork (UML). Ngoku ifumene inkxaso engezantsi komgca ophakathi (ML) kwaye inokucinezela amanqanaba oxhathiso kwangoko.
Ukusilela kwayo ukufikelela kwi-S1 (78.423) okanye ukuphinda uzame ukuhla komgca weporkfork (ml) utyikitye irali enokubakho. Ukuthatha amanqanaba oxhathiso kunye nokuvala ngaphezulu kwenqaku le-pivot yeveki (79.109) kunokuvula ukukhula okuqinileyo.
Ukuqhawuka okusebenzayo ngaphezulu kwe-pivot ye-79.109 kunokubhengeza ngakumbi kwixa elizayo.
Joyina iQela le-VIP APHA!
tags EURJPY, Iingcamango zorhwebo, ukuseta urhwebo
Ukuhla kwexeshana kwe-EUR / USD kuphelile
Ukuhlaziywa: 9 Juni 2021
I-EUR / USD yehlile kancinci kwixesha elifutshane kodwa i-bias ihlala ikhula. Ixabiso liphinde layifumana inqaku le-pivot yeveki kwaye ngoku ijongeka ikulungele ukuthengisa ngaphezulu. I-DXY iphantsi koxinzelelo olukhulu ngoku phambi kwedatha yokunyuka kwamaxabiso e-US ekhutshwe ngomso.
Namhlanje, i-German Balance Balance inyuke ukusuka kwi-14.0B ukuya kwi-15.9B, idlula i-15.7B ebilindelwe. Ukwehla okungaphezulu kwe-DXY kunokubenza buthathaka ubume obuluhlaza obunokuthi buyeke xa kuthelekiswa nabo bonke abakhuphisana nabo.
I-EUR / USD ithengiswa kwi-1.2191 kwaye icinezela i-1.2193 yangaphambili, ukumelana okungapheliyo. Ukuvala ngaphezulu kunokubonisa abathengi abomeleleyo kwixesha elifutshane. Kwakhona, ukutsiba kunye nokuzinza ngaphezulu kwenqanaba le-1.2201 kunokubhengeza ukukhula okuqinileyo.
Ukusilela kwayo ukuzinza phantsi kwenqanaba lokuphindisela kwakhona le-23.6% okanye ukusondela kunye nokufikelela kwi-S1 yeveki (1.2095) ibonakalise ukuba sinokuba nomfutho ophezulu. Idatha ye-NFP ayilwenzi ulungiso olukhulu olunokubakho.
Olunye ulwazi oluhlwempuzekileyo lokunyuka kwamaxabiso e-US oluxelwe ngomso lungonyusa i-EUR / USD. Ukungazinzi kunokuba phezulu kulo msitho wempembelelo ephezulu.
Esi sibini sinciphile kuphela ukuvavanya kwaye siphinda sibuyele kwindawo yenqaku leveki (1.2174) emva kokuphuma kwayo ngomsindo. Ukuphakama okuphezulu okuphezulu kunokubangela ukukhula okunokubakho kwi-R1.
tags ECB, i-eur, EURUSD, Iingcamango zorhwebo, Ukunyuka kwamaxabiso e-US